पर्याप्त वर्षा नहुँदा दाङमा अधिकांश खेत बाँझै, रोपाइँका लागि तयार भइसकेको बीऊ सुक्न थाल्यो – osnepal tv
पर्याप्त वर्षा नहुँदा दाङमा अधिकांश खेत बाँझै, रोपाइँका लागि तयार भइसकेको बीऊ सुक्न थाल्यो
उहाँले सिँचाइ सुविधा पुगेका ठाउँमा धान रोपाइँ सम्पन्न भए पनि अन्य ठाउँमा भने हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले धेरै ठाउँमा किसानहरुले ब्याड राखी, खेत जोतिसकेका र एक÷दुई दिनमा वर्षा हुने लक्षण देखिएको छ, वर्षा भएपछि रोपाइँ धमाधम हुने उहाँले बताउनुभयो ।
बस्नेतका अनुसार दाङमा अधिकाश किसानले राधा ४, हर्दिनाथ, रामधन, सुख्खा १, सुख्खा ३, मनसुली जातको धानखेती गर्ने गरेका छन् । दाङमा ३९ हजार हेक्टर जमीनमा धान खेती हुँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ । त्यसमध्ये केही जमिनमा सिँचाइ कुलो नहुँदा आकासे खेतीको भरमा समेत हँुदै आएको छ ।(रासस)
Previous article पलशाहलाई छाडेर आँचलले कोसँग बाधिन जोडी ?
Next article आजदेखि आँधीखोला लघुवित्तको साधारण शेयर बिक्री शुरु
पलशाहलाई छाडेर आँचलले कोसँग बाधिन जोडी ?
आजदेखि आँधीखोला लघुवित्तको साधारण शेयर बिक्री शुरु